Mareykanka Oo Ciidamo Dheeraad Ah U Diraya Sacuudi Carabiya - Ilays News
Mareykanka Oo Ciidamo Dheeraad Ah U Diraya Sacuudi Carabiya
October 12, 2019 admin1
Wasiirka gaashaan dhigga Mareykanka Mark Esper wuxuu sheegay inuu qalinka ku duugay amarka in ciidama dheeraad ah laga howl geliyo Sacuudi Carabiya ciidamadaasi oo ku hubeysnaan doono diyaaradaha dagaalka iyo habka difaaca.
Wuxuu intaa ku daray ciidamada ay Washington u direyso sacuudiga in jawaab looga bixinayo ‘khatarta gobolka soo food saartay’, isla-markaana boqortooyada Sacuudi Carabiya looga ilaaliyo ‘weerarrada gardarrada ay iiraan ku soo qaaddo’.
Tallaabadan Mareykanka uu Sacuudi Carabiya ciidamo dheeraad ah uga howl gelinaya ayaa imaneysa kaddib marki bishi hore ee September weerarro lagu qaaday goobo Sacuudiga ku yaalla oo saliidda ugu badan laga soo saaro.
“Ciidamada dheeraadka uu Mareykanka u dirayo gacan siinta boqortooyada Sacuudi Carabiya oo 3,000 ah oggolaashaha in ciidamadaasi la dirana la bixiyey bishi hore” ayuu yiri afhayeenka Pentagon Jonathan Hoffman.
Mareykanka ayaa tani iyo bishi May ee sanadkan kordhisay ciidamada ka joogo gobolka iyada gaarsiisay 14,000, sida uu sheegay telefishiinka CNN.
Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxammed bin Salmaan ayaa naga dalbaday taageerada dheeriga ah ayuu yiri Mr Esper.
Mareykankuna wuxuu meesha ka saaray sheegashada Xuutiyiinta Yemen ee ah in ay weerar ku qaadeen labo warshadood oo ay maamusho Sharikadda Aramco ee Sucuudiga laga leeyahay isaga oo eedda weerarkaasi dusha ka saaray Iran.
Maxamed bin Salmaan mar uu weerarkaasi ka hadlayeyna waxaa uu yiri: “Haddii ay beesha caalamka ay tallaabbada adag oo looga hortagayo gardarrada cad ee Iiraan ay qaadi weydo waxaan arki doonnaa saameyn iyo khatar badan oo soo food saarta danaha dunida.”
Halka ay hoggaamiyeyaasha Faransiiska, Jarmalka iyo Britain warmurtiyeed ay si wadajir ah u soo saareen ay ku sheegeen iney weerarka ka haynin faahfaahin xaqiiqda ku saleysan oo weerarkaasi ku saabsan.
Ms Esper oo jimcihi warfidiyeennada kula hadlay Pentagon wuxuu sheegay caddeeymaha weerararada kale ee gobolka ka dhacaya laga helayo ay nagu kallifayaan inaan Iran eedda dusha ka saarrno.
Wuxuuna sheegay ‘dabeecadda balaaya aloosidda’ ayaa noqotay mid uu dalka iiraan ugu jiro inuu xasiloonidarro uu ka abuuro bariga dhexe si ay u carqaladeyso dhaqaalaha dunida.